Qaybinta is Network Intelligent Terminal Products
Bannaanka vacuum breaker, biiro load, reclosing
Gudaha breaker vacuum & biiro
Wac qaybta ugu muhiimsan & qalab bedesheen
danab dhexe iyo sare set golaha biiro
Dhexdhexaad iyo sare gargaare danab iyo arrester hillaac
ahama kulanka Code'ka
TENPRO Sayniska-Tech PARK, 151 JINGQI RD. YEDZ, YUEQING, Zhejiang, Shiinaha
hesho heshiisyo dambeeyay iyo dalabyo gaar ah.
TXGN6-12 buufin golaha biiro
Supply Kartida: TENPRO
waxyaabaha qalabada xoojiyeen
sare sare customizable
golaha biiro buufin
Golaha Wasiirada ku biiro waa hab unit qaybsan, kaas oo lagu dari karaa si waafaqsan isticmaalka kala duwan, oo ka kooban yahay unugyo go'an iyo unugyada extensible in ay la kulmaan baahida loo qabo of isticmaali karo golaha biiro is haysta ee rugood kala duwan.
TXGN6-12 golaha biiro buufin waa nidaam gebi ahaanba laga shaabadeeyey. Dhammaan qaybaha ay ku nool yihiin iyo barta waxaa ku lifaaqan ee qolof ahama, qalabka biiro oo dhan aan la saameeyeen xaaladaha deegaanka dibadda, sidaas darteed waxaa loo hubiyo karo isku halaynta hawlgalka iyo ammaanka qof ahaaneed, oo ay ogaadaan feature ee dayactirka-free. By xulashada busbar extensible, isku darka wax kasta oo lagu gaari karo modularization buuxa. Extended ningax ammaanka busbar iyo ka gaashaamida si loo hubiyo isku halaynta sare iyo ammaanka. nooca TXGN6-12 golaha biiro buufin sidoo kale ku siin kara xal qalabaynta TV, foomka fikirka ah biiro caqli, iyo in la yareeyo culayska ka mid ah loo xirxiro beerta iyo debugging.
golaha nooca buufin biiro TXGN6-12 waa qaabeynta caadiga ah non-extensible iyo qaabeynta extensible caadiga ah. Sababta oo ah isku darka ee module buuxa iyo module bar iyo expansibility u gaar ah, waxa ay leedahay dabacsanaan aad u gaarka ah.
nooca TXGN6-12 buufin biiro fulisaa Heerka GB.
Nolosha design xaaladaha gudaha (20 ℃) ​​ka badan 30 sano.
model Product iyo macnaha
hadda lagu qiimeeyo
nooca la buufin golaha biiro
TXGN6-12 taxane golaha buufin SF6 gaaska sida qaanso deminta iyo dhexdhexaad madhxiya.
golaha Switch si buuxda loo shaabadeeyey, si buuxda dahaaran, busbar, biiro oo nool qaybo ka mid yihiin si nabad ah ku dhejisaa qolof ahama
qolkii wuxuu ka dheregsan yahay gaaska SF6 of 1.4bar, iyo fasalka ilaalinta waa ilaa IP67 :. Qalabka wuxuu ku biiro oo dhan waa lacag la'aan ka saameynta ay xaaladaha deegaanka dibadda. Xitaa ku hoos jira xaalad aad u daran sida bilowga biyo transience, biiray la si caadi ah u shaqeeya karaa iyo wax soo saarka waxay noqon kartaa dayactir la'aanta ah ee nolosha.
Golaha Wasiirada ku biiro waxay leedahay qalab kaamil ah "shan ka hortagga" waaxyihiisu, kaas oo gebi ahaanba la baabi'iyo karaa shaqaalaha iyo cillad qalabka ay keentay qalad aadanaha.
Dhamaan armaajooyinka ku biiro leeyihiin channels gargaarka cadaadis amaan la isku halayn karo, oo xataa xaaladaha khatarta ah si loo xaqiijiyo badbaadada qof ahaaneed ee ka shaqeeya.
golaha Switch u qaybsan yahay go'an darka unit iyo isku darka unit extensible.
armaajooyinka Switch waxaa sida caadiga ah lagu horraysiiyey oo ka mid ah line ah, iyo sidoo kale in lagu dhejiyaa karaa meelo kala duwan si ay u gaaraan kooxda outlet ama dhinaca fidinta
size ee golaha wasiirada ku haboon si loo soo dajiyo iyo wuxuu noqon karaa mid ku haboon meesha bannaan ee yar yar iyo xaaladaha deegaanka saboolka ah.
golaha Switch la qaybiyay kartaa qalabka gacanta iyo ogaanshaha korontada, fogfog sida ay baahiyaha kala duwan ee isticmaala.
C load module ku biiro
F module qalabka korontada marka la isku daro
Go'doon / biiro grounding
vacuum (circuit) baxsadeen oo
inta jeer ee lagu qiimeeyo
inta jeer Power adkeysan danab (isku / jebiyey)
inta jeer hillaac u adkeysan danab
Qiimeeyo xiran-loop breaking hadda
Qiimeeyo xukun cable iyo hadda jabiyay
Qiimeeyo qaadashada-circuit gaaban hadda (peak)
peak qiimeeyo adkeysan hadda
waqti-gaaban qiimeeyo adkeysan hadda
Qiimeeyo-circuit gaaban breaking hadda
Qiimeeyo hadda kala iibsiga
hadda ugu badan ee fiyuusyada
nolosha si farsamaysan
Previous: TXGN66-12 (Z) qalab ku lifaaqan Beddelashada go'an danab sare qalab Beddelashada
Next: 12 TXGNH-nooca Box-go'an qalab Beddelashada bir-lifaaqan danab sare qalab Beddelashada
Unit Hexafluoride High danab Ring Main
Unit danab Ring Main Sare
Unit dayashada Abb-Nooca Ring Main
Unit dayashada Schneider-Nooca Ring Main
Gudaha Unit Ring Main Go'doon Switch
Maatadii (R) N36-12D load Hexafluoride com biiray-qarxiye ...
TZN63 (TVBM7) -12 Side-dhajinta kooxda Fluminense bisha sare gudaha ...
TSD ahama kulanka Code'ka steel (ilig - ...
TGN24-12D taxane gudaha go'doomin danab sare ...
TZN23-40.5Cseries handcart gudaha vacuum nooca c ...
TZN63A (TVS1) -24 gudaha danab sare ci vacuum ...